सातै प्रदेशको झाँकीसहित संविधान दिवसको झलक [फोटो फिचर]
नेपाल लाइभ शुक्रबार, असोज ३, २०७६, १४:५५
काठमाडौं- चौथो संविधान दिवसका अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी र सैनिक कौशल प्रदर्शन गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत उपस्थितिमा आयोजित उक्त समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत निकायबाट सातै प्रदेशका सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए।
संविधान दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउने क्रममा सेनाको हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो।
यसैगरी विकास निर्माण र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सँग सम्बन्धित झाँकी पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा सहभागीले हातहातमा राष्ट्रिय झन्डा प्रदर्शन गरेका थिए। रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवासमेत उडाइएको थियो।
भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
डडेल्धुरामा मदिरा सेवन गरी कर्मचारीले गरे वडाअध्यक्षमाथि हातपात
के छ बजेटको ब्रिफकेसमा? [फोटो फिचर] केही समयमा बस्ने संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। बिहीबार, जेठ १५, २०७७
कोरोनालाई जितेपछि... [फोटो फिचर] मंगलबार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत २१ जना कोरोना संक्रमित निको भएको पुष्टि भयो। निको भएपछि १६ पुरुष र ५ मह... बुधबार, जेठ १४, २०७७
खेलकुदले जुराएको प्रेममा जात तगारो, कसरी मारिए नवराज? जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-४ रानागाउँका २१ वर्षका युवक हुन् नवराज। छिमेकी जिल्ला पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोतीकी १७ वर्षकी... मंगलबार, जेठ १३, २०७७
डडेल्धुरामा मदिरा सेवन गरी कर्मचारीले गरे वडाअध्यक्षमाथि हातपात शुक्रबार, जेठ १६, २०७७